बाइबलले रिसबारे के भन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्यामा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (क्युआटोनी) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाश्कीर बिस्लामा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा विची वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
रिसाउने मानिस र तिनी वरपर भएकाहरूको लागि अनियन्त्रित रिस हानिकारक हुन्छ भनी बाइबल सिकाउँछ। (हितोपदेश २९:२२) कहिलेकाहीँ रिस उठ्‌नुपछाडि जायजै कारण भए तापनि “रिस” पालिराख्ने मानिसले उद्धार पाउने छैन भनी बाइबल बताउँछ। (गलाती ५:१९-२१) रिसलाई नियन्त्रणमा राख्न मदत गर्न सक्ने सिद्धान्तहरू बाइबलमा पाइन्छ।
के रिसाउनु सधैँ गलत हो?
कुन अवस्थामा रिसाउनु गलत हो?
तपाईँ कसरी आफ्नो रिसलाई काबूमा राख्न सक्नुहुन्छ?
रिससम्बन्धी बाइबल पदहरू
होइन। कुनै-कुनै अवस्थामा रिसाउनुपछाडि जायज कारणहरू हुन सक्छन्‌। जस्तै, आफ्ना केही सङ्‌गी उपासकहरूले थिचोमिचो भोगेको कुरा सुनेपछि नहेम्याह नाम गरेका वफादार पुरुषलाई “साह्रै रिस उठ्‌यो।”—नहेम्याह ५:६.
कहिलेकाहीँ परमेश्‍वरलाई पनि रिस उठ्‌छ। जस्तै, पुरातन समयका परमेश्‍वरका मानिसहरूले उहाँको मात्र उपासना गर्ने करार बाँधेका थिए; तर तिनीहरूले त्यो करार तोडे अनि झूटा देवताहरूलाई पुज्न थाले। यसो गर्दा “यहोवा परमेश्‍वरको क्रोध [तिनीहरूमाथि] दन्कियो।” (न्यायकर्ता २:१३, १४) तैपनि रिस यहोवा परमेश्‍वरको व्यक्‍तित्वको मुख्य पक्ष भने होइन। उहाँको रिस सधैँ जायज हुनुका साथै नियन्त्रित हुन्छ।—प्रस्थान ३४:६; यसैया ४८:९.
कुनै जायज कारणविना रिसाउनु वा रिसलाई काबूमा राख्न नसक्नु गलत हो। तर त्रुटिपूर्ण मानिसहरू अक्सर यस्तै गर्छन्‌। आउनुहोस्‌ केही उदाहरण विचार गरौँ:
परमेश्‍वरले कयिनको भेटी अस्वीकार गर्नुहुँदा तिनी “रिसले चूर भए।” तिनी यति धेरै रिसाए कि तिनले आफ्नो भाइलाई मारे।—उत्पत्ति ४:३-८.
परमेश्‍वरले निनवेका मानिसहरूलाई अनुग्रह देखाउनुहुँदा भविष्यवक्‍ता योना “रिसले चूर भए।” तिनी त्यसरी “रिसले चूर हुनु ठीक” होइन भनेर परमेश्‍वरले तिनलाई सम्झाउनुभयो। बरु तिनले पश्‍चात्तापी मानिसहरूप्रति दया देखाउनुपर्ने थियो।—योना ३:१०–४:१, ४, ११. *
“रिस गर्ने मानिस परमेश्‍वरको धार्मिक स्तरबमोजिम चलिरहेको हुँदैन” भनेर यी उदाहरणहरूले देखाउँछ।—याकुब १:२०.
अनियन्त्रित रिसको खतराप्रति सचेत रहनुहोस्‌। कसै-कसैलाई रिस पोखाउनु आफ्नो बलियो पक्ष हो जस्तो लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा आफ्नो रिसलाई काबूमा राख्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो। “रिस थाम्न नसक्ने मानिस पर्खाल भत्किएको सहरजस्तै हो।” (हितोपदेश २५:२८; २९:११) अर्कोतर्फ हामीले रिसलाई काबूमा राख्न सक्यौँ भने हामीले साँचो बल र समझदारी देखाइरहेका हुन्छौँ। (हितोपदेश १४:२९) बाइबल यसो भन्छ: “हतपती नरिसाउने मानिस वीर योद्धाभन्दा असल हो।”—हितोपदेश १६:३२.
पछि पछुताउनुपर्ने केही कुरा गर्नुअघि नै आफ्नो रिसलाई काबूमा राख्नुहोस्‌। भजन ३७:८ यसो भन्छ: “रिसाउन छोड र क्रोध त्यागिदेऊ; व्याकुल भएर कुकर्मतिर नलाग।” याद गर्नुहोस्‌, रिसले हामीलाई “कुकर्मतिर” डोऱ्‍याउनुअघि नै हामी रिसाउन छोड्‌न सक्छौँ। एफिसी ४:२६ यसो भन्छ: “क्रोध गर तर पाप नगर।”
रिस उठेपछि सम्भव भएमा त्यस ठाउँबाटै निस्कनुहोस्‌। बाइबल यसो भन्छ: “झगडा सुरु हुनु पानीको बाँध फुट्‌नुजस्तै हो; झगडा चर्किनुअघि नै त्यस ठाउँबाट निस्किहाल।” (हितोपदेश १७:१४) अरूसितको मतभेद सकेसम्म छिटो सुल्झाउनु बेस भए तापनि तपाईँ र अर्को व्यक्‍तिले शान्त भई कुरा गर्न सक्नको लागि पहिला आफ्नो रिसलाई साम्य पार्नुपर्ने हुन सक्छ।
तथ्य थाह पाउनुहोस्‌। हितोपदेश १९:११ यसो भन्छ: “अन्तर्दृष्टि भएको मानिसले रिसलाई काबूमा राख्छ।” कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि सबै तथ्य थाह पाउनु बुद्धिमानी हो। सबै पक्षको कुरा सुनेमा जायज कारणविना रिसाउने सम्भावना कम हुन्छ।—याकुब १:१९.
मनोशान्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्‌। प्रार्थनाले हामीलाई ‘मानिसको समझभन्दा बाहिरको परमेश्‍वरको शान्ति’ अनुभव गर्न मदत गर्न सक्छ। (फिलिप्पी ४:७) परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍ति पाउने मुख्य तरिका प्रार्थना हो। पवित्र शक्‍तिले हामीलाई शान्ति, धीरज र आत्मसंयमजस्ता गुणहरू विकास गर्न मदत गर्छ।—लुका ११:१३; गलाती ५:२२, २३.
आफ्नो सङ्‌गतिबारे होसियार हुनुहोस्‌। हामी जस्तो मानिससित सङ्‌गत गर्छौँ, त्यस्तै हुन्छौँ। (हितोपदेश १३:२०; १ कोरिन्थी १५:३३) त्यसैले बाइबलमा यस्तो चेतावनी दिइएको छ: “गरम मिजासको मानिससित सङ्‌गत नगर अनि सानो कुरामा पनि जङ्‌गिने मानिससित नबस। नत्र त तिमीले उनीहरूको सिको गर्नेछौ अनि आफै पासोमा पर्नेछौ।”—हितोपदेश २२:२४, २५.
हितोपदेश १६:३२: “हतपती नरिसाउने मानिस वीर योद्धाभन्दा असल हो।”
अर्थ: आफ्नो रिसलाई काबूमा राख्न सक्नु मानिसको बलियो पक्ष हो।
हितोपदेश १७:१४: “झगडा सुरु हुनु पानीको बाँध फुट्‌नुजस्तै हो; झगडा चर्किनुअघि नै त्यस ठाउँबाट निस्किहाल।”
अर्थ: चर्काचर्की हुने अवस्थामा पुग्नुअघि नै त्यस ठाउँबाट निस्कनुहोस्‌।
हितोपदेश १९:११: “अन्तर्दृष्टि भएको मानिसले रिसलाई काबूमा राख्छ।”
अर्थ: कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि सबै पक्ष विचार गरेमा अनावश्‍यक रूपमा रिसाउनदेखि जोगिन सक्छौँ।
हितोपदेश २२:२४, २५: “गरम मिजासको मानिससित सङ्‌गत नगर अनि सानो कुरामा पनि जङ्‌गिने मानिससित नबस। नत्र त तिमीले उनीहरूको सिको गर्नेछौ।”
अर्थ: रिसाहा मानिसहरूसित सङ्‌गत गऱ्‍यौँ भने हामी पनि तिनीहरूजस्तै हुन सक्छौँ।
हितोपदेश २९:११: “मूर्ख मानिसले आफ्नो रिस पोख्छ।”
अर्थ: भावनाको वशमा पर्नुको सट्टा हामीले आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नु बुद्धिमानी हो।
गलाती ५:२२, २३: “पवित्र शक्‍तिको फलचाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्‍वास, नम्रता, आत्मसंयम हो।”
अर्थ: परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍तिले रिसलाई काबूमा राख्न सघाउने गुणहरू विकास गर्न मदत गर्छ।
एफिसी ४:२६: “क्रोध गर तर पाप नगर।”
अर्थ: हामीलाई कहिलेकाहीँ रिस उठ्‌न सक्छ तर त्यसलाई नियन्त्रणमा भने राख्न सक्छौँ।
याकुब १:१९: “हरेक मानिस सुन्‍नलाई सधैँ तयार हुनुपर्छ, बोल्न हतार गर्नु हुँदैन अनि हतपती रिसाउनु हुँदैन।”
अर्थ: राम्ररी सुन्‍ने मानिस हुँदा हामी आफ्नो रिसलाई काबूमा राख्न सक्छौँ।
^ अनु.6स्पष्ट छ, परमेश्‍वरले सच्याउनुहुँदा योनाले स्विकारे र रिस पालिराखेनन्‌ किनभने परमेश्‍वरले तिनलाई बाइबलको एउटा भाग लेख्न चलाउनुभयो, जुन तिनकै नामबाट चिनिन्छ।
इस्राएलका राजा दाऊदको जीवनमा घटेको एउटा घटनाले तपाईंलाई झनक्क रिस उठ्दा आफ्नो रिसलाई वशमा राख्न मदत गर्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबलले रिसबारे के भन्छ?
ijwbq लेख १५२
रिसलाई कसरी काबूमा राख्ने?